သူတို့အာဘော် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
ဝီရသူ သဘောထား (၆/၇၄)
ငြိမ်းချမ်းအေး - ဘုရားက ကျနော့်ဘက်မှာပါ
ဇင်လင်း ● ပြည်တွင်းစစ် အလိုမရှိ၊ ငြိမ်းချမ်းပါစေ မြန်မာပြည်
Tu Maung Nyo - သော့ခလောက်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ ကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့လားခင်ဗျ
တော်လှန်ရေး၊ တည်ဆောက်ရေး နဲ့ ဘကြီးမိုး
မောင်မောင်စိုး - ပြည်တွင်းစစ် အခြေခံ
မောင်မိုးသူ - သမဂ္ဂ ၊ ဒီမိုကရေစီ နဲ့ အနီကြောက်တဲ့ရောဂါ
တိုးအောင်တက် - ရွှေမန်းနှင့် နိုင်ငံရေး သီအိုရီ
ဇင်လင်း ● အာဏာရှင်စနစ်ကချန်ထားရစ်သည့် ဗျူရိုကရေစီကြိုးနီ စနစ်ကို ဖယ်ရှားကြဖို့ လိုပြီ
ဇင်လင်း ● အာဏာရှင်စနစ်ကချန်ထားရစ်သည့် ဗျူရိုကရေစီကြိုးနီ စနစ်ကို ဖယ်ရှားကြဖို့ လိုပြီ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်သည် အတိတ်မှအရိပ်မည်းများ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှ လုံးဝလွတ်မြောက်ပြီဟု မဆို နိုင်သေးပေ။ အာဏာရှင်စနစ်ကချန်ထားရစ်သည့်...
မောင်ရစ် – ရွေးကောက်ပွဲကနေ အာဏာရှင်တွေ တက်လာကြတာပဲ
မောင်ရစ် – ရွေးကောက်ပွဲကနေ အာဏာရှင်တွေ တက်လာကြတာပဲ (အယ်ဒီတာ့လက်ရေး) မိုးမခ၊ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၈ ဘယ်နှယ့် ရွေးကောက်ပွဲကနေ အာဏာရှင်တွေ တက်လာကြမှာတုံး။ အာဏာသိမ်းပြီးတော့သာ အာဏာရှင်ဆိုတာ တက်လာရတာပါလို့ ပြောရမယ် ထင်တာ။...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● အယ်ဒီတာတို့၏ အသံများ
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● အယ်ဒီတာတို့၏ အသံများ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၈ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် အယ်ဒီတာတို့ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများမှာကား ကဗျာစာမူပို့သူများကို ပြန်လည်ဖြေရှင်း ပေးနေရသောပြဿနာများလည်း ပါဝင်လေသည်။ စာပေလောကထဲသို့ ကလောင်သစ်များအဖြစ် ဝင်ရောက်လာသော လူငယ်ကလောင်သစ်များအများစုသည်...
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သော ပညာရေး
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သော ပညာရေး (မိုးမခ) မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သောပညာရေးဆိုသည်မှာ စာပေတစ်ခုတည်းကိုသာ အားပြုသင်ကြားပေးသော ပညာရေးမဟုတ်ပါ စာကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်ပြီး အမှတ်ရအောင် ဖြေဆိုရသောပညာရေးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်သောပညာရေး သည်ကား စာဖတ်နည်း၊ စာရေးနည်း၊...
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – ဖေ့စ်ဘွတ်ပရိသတ်ကြီး အဆင့်မြင့်ကြဖို့အရေး
လောကဓာတ်ခန်းသာဂိ – ဖေ့စ်ဘွတ်ပရိသတ်ကြီး အဆင့်မြင့်ကြဖို့အရေး (မိုးမခ) မတ် ၂၃၊ ၂၀၁၈ မတ် ၂၁ မှာ အင်တာနက်သတင်းတွေအရ Cambridge Analytica နည်းပညာဆက်ဆံရေးကုမ္မဏီဟာ ၂၀၁၆ ဇွန်လကတည်းက ဖေ့စ်ဘွတ် ပရိသတ်ရဲ့...
မင်းကိုနိုင် ● ဖိနပ်အပေါင်းရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေ
မင်းကိုနိုင် ● ဖိနပ်အပေါင်းရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ကိုမင်းကိုနိုင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ ဖိနပ်ဟောင်း မှန်သမျှဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြစရာရှိတယ်ဟု ကျွန်တော်ကအဆိုတင်ချင်သည်။ ဖိနပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဇာတ်လမ်း လူတိုင်းကိုယ်စီရှိသည်မဟုတ်ပါလား။ တစ်ယောက်က ပြောလိုက်သည်နှင့်ကိုယ့်မှာလည်းပြောစရာအသင့်ရှိပြီးသား။...
ဇင်လင်း ● အဂတိတရားလေးပါးကို စောင့်ထိန်းကြမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ဆောက်နိုင်မည်
ဇင်လင်း ● အဂတိတရားလေးပါးကို စောင့်ထိန်းကြမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး တည်ဆောက်နိုင်မည် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၈ နိုင်ငံတကာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ (Transparency International) က ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစာရင်း ကို...
ဇင်လင်း ● နိုင်ငံတကာရှေ့နေများ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစည်းအရုံး (IBAHRI) ၏ “မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်နှင့် တပ်မတော်အခန်းကဏ္ဍ” အပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်
ဇင်လင်း ● နိုင်ငံတကာရှေ့နေများ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစည်းအရုံး (IBAHRI) ၏ “မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်နှင့် တပ်မတော်အခန်းကဏ္ဍ” အပေါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက် (မိုးမခ) မတ်လ ၁၇၊ ၂ဝ၁၈ ● နောက်ခံ အခြေအနေ...
ဇင်လင်း ● အမျိုးသားညီညွတ်ရေးရှိမှသာ ကြီးမားသည့်စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်မည်
ဇင်လင်း ● အမျိုးသားညီညွတ်ရေးရှိမှသာ ကြီးမားသည့်စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်မည် (မိုးမခ) မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မှောက်သမိုင်း၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့သည် သမိုင်းတဆစ် အချိုးအကွေ့ဟု ဆိုသော်...
မိုက်ခဲစိန် – သေနတ်တွေ ထိန်းချုပ်မှာလား၊ ကာကွယ်မှာလား၊ အမေရိကား
မိုက်ခဲစိန် – သေနတ်တွေ ထိန်းချုပ်မှာလား၊ ကာကွယ်မှာလား၊ အမေရိကား (မိုးမခ) မတ် ၂၊ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဗလင်တိုင်းနေ့မှာ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ ပတ်ခ်လင်းမြို့၊ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းသားနဲ့ ဆရာ စုစုပေါင်း...
အောင်မျိုးဦး ● မတူကွဲပြားသော ရခိုင့်နောင်ရေး သုံးသပ်ချက်
အောင်မျိုးဦး ● မတူကွဲပြားသော ရခိုင့်နောင်ရေး သုံးသပ်ချက် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈ ရခိုင်တွေကို ပညာတတ်စေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် မယမင်းမြတ်အေးက ရခိုင့်နောင်ရေးဟူသည့် ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို တင်ပြလာပါသည်။ ရခိုင်တွေ ပညာတတ်ဖို့ လိုတယ်၊...
ဇင်လင်း ● အမျိုးသားရေးတာဝန် ဖြစ်လာသည့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး
ဇင်လင်း ● အမျိုးသားရေးတာဝန် ဖြစ်လာသည့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈ ယခုတလော မြန်မာနိုင်ငံ အနှန့် အပြားတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားမှုနှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏသည် ဒီရေတက် သကဲ့သို့ တရိပ်ရိပ်...
ဇင်လင်း ● ပို၍ခိုင်မာသော ပို၍ကျယ်ဝန်းသော အများကို ပို၍နေရာပေးနိုင်သော ပြည်ထောင်စုဆီသို့ ရှေးရှုရေး
ဇင်လင်း ● ပို၍ခိုင်မာသော ပို၍ကျယ်ဝန်းသော အများကို ပို၍နေရာပေးနိုင်သော ပြည်ထောင်စုဆီသို့ ရှေးရှုရေး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာ အခက်အခဲပေါင်းများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လက်ရှိပြည်သူလူထုက ရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်သော...
ဇင်လင်း ● ရန်လိုမှုများ လျှော့ချနိုင်မှ သံသယများလျော့ကျနိုင်မည် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ကြာဆုံးဟု ဆိုရမည့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းစစ်သည် တငွေ့ငွေ့လောင်လိုက် တဟုန်းဟုန်းတောက် လိုက်ဖြင့် ငြိမ်းပြီ အေးပြီဟု...
အောင်ခိုင်မြင့် ● စစ်လေယာဉ်နဲ့ဗုံးကျဲပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်၍မရနိုင်ပါ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂ဝ၁၈ ပကတိ အခြေအနေအရ ယနေ့မြန်မာပြည်မှာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ရေးသည် မရှိမဖြစ် အကြီး အကျယ်လိုအပ်နေပေသည်။ တချိန်ထဲတွင် တိုင်းပြည်၌...
စိန်ဝင်း (MJI) ● အင်းဒင်ရယ် မင်းကြောင့်
စိန်ဝင်း (MJI) ● အင်းဒင်ရယ် မင်းကြောင့် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈ ရိုက်တာရဲ့ အင်းဒင်လူသတ်မှု သတင်းထွက်တော့ သတင်းသမားတွေအကြား ငြင်းစရာပွက်ကုန်တယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ တစ်ခြားအသိုင်းအဝိုင်းက ဝင်ပြောတာ၊ ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းတာ အတော်နည်းတယ်လို့...
မောင်လူပေ ● ကမ္ဘာ့ငွေ၊ မြန်မာ့ငွေ…. ဘယ်သူတွေစိုးမိုးထား
မောင်လူပေ ● ကမ္ဘာ့ငွေ၊ မြန်မာ့ငွေ…. ဘယ်သူတွေစိုးမိုးထား (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ တစ်နှစ်လုံးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေ ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တဲ့ ငွေအားလုံးရဲ့ ၈၂%ကို ထိုလူတွေထဲက အချမ်းသာဆုံးသော...
ကိုအောင်မှိုင်း ● အတွေးအခေါ်ဟောင်းဖြင့် တိုင်းပြည်သစ်တည်ထောင်ခြင်း
ကိုအောင်မှိုင်း ● အတွေးအခေါ်ဟောင်းဖြင့် တိုင်းပြည်သစ်တည်ထောင်ခြင်း (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၈ မည်သူသည် ကျနော်တို့၏ ရန်သူနည်း။ မည်သူသည် ကျနော်တို့၏ မိတ်ဆွေနည်း။ ဤပြဿနာသည် တော်လှန်ရေးအ တွက် အရေးအကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်သည်။ အတိတ်က...
မြင့်ကျော် ● သတင်းမီဒီယာတွေ သြဇာရှိဖို့ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ညနေ ရုံးကအပြန် သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်လေး (ဖိုးသောကြာ ခေတ်+မိုး) ဆီ ဝင်ဖြစ်တယ်၊ မ ရောက်တာ ၁...
စိန်ဝင်း(MJI) – မြောက်ဦးအရေး၊ ရှင့်မှာလည်း ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်မမှာလည်း အကြွေးတွေနဲ့
စိန်ဝင်း(MJI) – မြောက်ဦးအရေး၊ ရှင့်မှာလည်း ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်မမှာလည်း အကြွေးတွေနဲ့ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်က ကူးပါတယ်) မြောက်ဦးမှာ ရဲဘက်က ပစ်ခတ်လို့သေတဲ့သူတွေကြည့်တော့ လူငယ်အရွယ်ကောင်းတွေ၊ ပုံတွေမြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲ။...
Page5of 55«1...34567...55»